အကြိမ် ၆၀ မြောက် ဂရမ်မီဆုပေးပွဲမှာ ဆုရရှိသွားကြသူများ
On January 29, 2018 February 1, 2018 By Atsuko
ယနေ့ကျင်းပတဲ့ အကြိမ် ၆၀ မြောက် ဂရမ်မီဆုပေးပွဲမှာ ၂၀၁၇ တစ်နှစ်တာအတွင်းထွက်ရှိခဲ့တဲ့သီချင်းတွေနဲ့ အဲဒီသီချင်းတွေကိုသီဆိုခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲက ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သူတွေကို ရွေးချယ်ဆုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်ဆုပေးပွဲအတွက်၂၀၁၆ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်ကနေ ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်အတွင်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေပဲအကျုံးဝင်တာဖြစ်လို့ စက်တင်ဘာ ၃၀ ထက်နောက်ကျတဲ့သီချင်းတွေကို ၆၁ ကြိမ်မြောက်ဂရမ်မီပွဲကျမှမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ဆုပေးပွဲမှာ JAY-Z က ဆန်ခါတင် ၈ ဆု၊ Kendrick Lamar က ဆန်ခါတင် ၇ ဆု၊ Bruno Mars က ဆန်ခါတင် ၆ ဆုတို့နဲ့ထိပ်ဆုံးကဦးဆောင်နေခဲ့ပြီး ဘယ်သူတွေက ဂရမ်မီဆုတွေ ဆွတ်ခူးရရှိသွားတယ်ဆိုတာကိုတော့ ဒီဆောင်းပါးကို ရင်ခုန်စွာနဲ့ဆက်လက်ဖတ်ရှုသွားလိုက်ပါလို့…
The Recording Academy and GRAMMY Award logos are registered trademarks of the Recording Academy and are used under license.
PREVIOUS POST Previous post: နိုင်ငံပေါင်း ၁၇ နိုင်ငံရဲ့ iTunes Albm Chart မှာ နံပါတ် ၁ နေရာရယူထားတဲ့ IKON ရဲ့ Come Back Album “Return” ထဲက “Love Scenario”
NEXT POST Next post: K Pop Idol နဲ့ မတူပဲ ခွဲထွက်နေတဲ့ Kpop Idol Group တစ်ခုဖြစ်တဲ့ KARD !!